सामूदायिक भवन निर्माणमा बिबाद,सबैको अपनत्व हुने गरी भवन बनाउनु पर्ने माग | Enepal Patra Pvt. Ltd.
सामूदायिक भवन निर्माणमा बिबाद,सबैको अपनत्व हुने गरी भवन बनाउनु पर्ने माग
पथरीशनिश्चरे( मोरङ) १९ जेठ । प्रदेश सभा सदस्य कृष्णकुमारी राई र पथरीश्निश्चरे २ का वडाध्यक्ष यामप्रसाद गुरागाईको दबाबमा जवरजस्ती सामूदायिक भवन निर्माण गर्न थालिएपछि बिबाद उत्पन्न भएको छ ।
जग निर्माणको आधा भन्दा बढी काम गरी सकेर गत जेठ १५ गते सांसद राईले सामूदायिक भवनको शिलान्यास गर्नु भएको थियो । १ वर्ष गठित उपभोक्ता समितिले २ कट्ठा जग्गामा सामूदायिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा शहरी विकास कार्यालय विराटनगरले मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै भवन निर्माण प्रक्रिया रोकेको थियो ।सामूदायिक भवन बनाउन कम्तीमा ३ कट्ठा जग्गा चाहिने , सामूदायिक संस्थाको नाममा जग्गा हुनु पर्ने निरन्तर र अविछिन्न संस्था हुनु पर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । पुरानो उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पर्शुराम गुरुङले भन्नुभयो – गत वर्ष हामीले २ कट्ठा जग्गा रहेको सहमति लिएर जाँदा प्रक्रिया अघि बढेन । तर, अहिले अर्कै स्वायत्त संस्थाको आँगनमा लगेर सामूदायिक भवनको निर्माण सुरु भएको छ । उहाँले सत्ताको आडमा जवरजस्ती काम सुरु गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले कुनै धर्म विशेषको आस्थामा हामीले चोट पु¥याउँदैनौं । तर विधि , नियम र कानून सबैलाई बराबर प्रयोग हुनु पर्छ ।
गत जेठ १५ गते प्रदेश सांसद कृष्णकुमारी राईले सामूदायिक भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । तर, शिलान्यास हुँदा जग निर्माणको आधा भन्दा बढी काम भइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिएको कार्यक्रम ‘ एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामूदायिक भवन निर्माण ’ अन्तरगत यो कार्यक्रम पथरीशनिश्चरे २ मा आएको प्रदेश सभा सांसद सुयर्माराज राई बताउनु हुन्छ । राईले भन्नुभयो – प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि तय भएको कार्यक्रम शिलान्यास हुँदा सूचना सम्म दिइएन । राईले आम नागरिकको भावना विपरित मन्दिर भित्र लगेर सामूदायिक भवन निर्माण गर्दा भोलि समस्या सिर्जना हुने संकेत गर्नुभयो । मन्दिरका लागि सामूदायिक भवन आवश्यक छैन् भन्ने होइन । तर , प्रदेश सरकारले जुन उदेश्यले भवन निर्माण गर्न खोजेको हो त्यो उदेश्य पुरा भएन ।
शहरी विकास कार्यालयको लाचारपन
भवनको जेठ १५ गते शिलान्यास भयो । निर्माण सुरु भएको ५ दिनमा नै ७० फिट लम्बाई र ३१ फिट चौडाईको भवनको जगको काम सकिएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी जानकारहरू भन्छन् आधा काम सकेर शिलान्यास भएको देखिन्छ । ५ दिनमा यति धेरै काम गर्न नै मिल्दैन । ५ दिनमा नै यो सबै काम भएको हो भने भवनमा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको छ । जुन दिन भवन निर्माणको शिलान्यास भयो । सोही दिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख राम सवरण चौधरीले पथरीशनिश्चरे नगर कार्यालयलाई पत्र लेख्दै निर्माण कार्य स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारी कार्यालयको उक्त पत्र बारे उपभोक्ता समिति र पथरीशनिश्चरे २ नं. वडा कार्यालय बेखबर छ । उपभोक्ता समितिका सचिव कमल निधि घिमिरे भन्नुभयो – फोटो कपि आएको छ , भन्ने सुनेको हुँ । तर पत्र देखेको छैन । उता २ नं.वडाका अध्यक्ष यामप्रसाद गुरागाईले समेत पत्र आएको सुनेको भए पनि आफ्नो कार्यालयमा हाल सम्म प्राप्त नभएको जवाफ दिनुभयो ।
कांग्रेस भन्छ – निर्माण कार्य तुरुन्त रोक
्काम सुरु भएको एक साता वित्न लाग्दा समेत उपभोक्ता समितिले आयोजनाको स्चना पाटी राखेको छैन् । सचिव घिमिरेले लकडाउनका कारण सुचना पाटी राख्न नसकिएको बताउनु भयो ।
प्रकशित मिति : 2020-06-01